ရုရှားတွင်မပြုနိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောလူ့အခွင့်အရေးတရားစီရငျ၏ဥရောပတရားရုံး - Yuko ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ဆုပေးပွဲအဘို့အအကျိုးဆက်များ
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / ရုရှားတွင်မပြုနိုင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောလူ့အခွင့်အရေးတရားစီရငျ၏ဥရောပတရားရုံး - Yuko ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ဆုပေးပွဲအဘို့အအကျိုးဆက်များ
13/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အပေါ် 19 ဇန္နဝါရီလ 2017, ရုရှားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုနိုင်ငံတော်ကလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥရောပတရားရုံးနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့တာဝန်အောက်မှာမဟုတျကွောငျးအုပ်ချုပ် ("ECtHR") အဆိုပါ Yuko ဖြစ်ရပ်မှန်တွင်တရား, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် EUR ချီးမြှင့်ထားတဲ့ 1.9 ကုမ္ပဏီမှလျော်ကြေးအတွက်ဘီလျံအထိ (အဆိုပါ ECtHR ရဲ့သမိုင်းထဲမှာအကြီးဆုံး), ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်း၏ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ချိုးဖောက်၏ ("ဥရောပလူ့အခှငျ့အရေးတရားရုံးသို့").
အဆိုပါ Yuko ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိနှင့်၎င်းတို့၏နေဆဲ-ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဘက်တော်သားတရားစွဲဆိုမှုဖို့ ECtHR တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း၏ဆက်စပ်မှုကတင်ပြချက်များနှင့်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ရည်ညွှန်းခံရစောင့်ရှောက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Yuko Affair ပေါ်မှာငါတို့ယခင်မှတ်ချက်များကိုတွေ့စေခြင်းငှါ ဒီမှာ.
အဆိုပါ ECtHR တရားသဖြင့်စီရင်, အဆိုပါခုံသမာဓိဆုမှမတူဘဲ, တရားမဝင် expropriation အပေါ်တစ်ဦးတွေ့ရှိချက်စေခဲ့ပါဘူး. ထိုသို့ပြုကြသည်, သို့သော်, ဒါဟာရုရှားအာဏာပိုင်များအားဖြင့်ညှဉ်းဆဲခဲ့ကွောငျးတောင်းဆိုသူရဲ့အငြင်းပွားမှုများအပေါ်လိုလိုလားလားအုပျစိုး, ယင်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းတရားစွဲဆိုမှုဟာသူတို့ရဲ့ကွှေးကျွောရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးအချိုးအစားမညီမျှမှုထုံးစံ၌ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့နိဂုံးချုပ် (အခွန်စုဆောင်းမှု) နှင့်ကုမ္ပဏီ၏နိဂုံးကိုအတွက်ရလဒ်. ဤသတင်းဆောင်းပါးကိုတစ်ဖောက်ဖျက်ဖွဲ့စည်း 1 အဆိုပါဥရောပလူ့အခှငျ့အရေးတရားရုံးသို့ပထမထပ်ဆောင်းပရိုတိုကောများ (အိမ်ခြံမြေ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု). Yuko ရုံစိတ်ကျေနပ်မှုကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်သော်လည်း, စီရင်တော်မူခြင်းဝိရောဓိကိုရုရှားများအတွက်အောင်ပွဲအဖြစ်ယူဆခဲ့သည်, အဆိုပါ ECtHR နိုင်ငံတော်မကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌သရုပ်ဆောင်နှင့်အခွန်စုဆောင်းမှု၏ငာမှတဆင့် Yuko ဒေဝါလီခံရန်၎င်း၏အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တောင်းဆိုသူရဲ့အငြင်းအခုံကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးကတည်းက.
အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုအဘယျသို့ဆန့်ကျင် 46 ဥရောပလူ့အခှငျ့အရေးတရားရုံးသို့, ပါဝင်ပတ်သက်မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက်နောက်ဆုံးနှင့် ECtHR ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်၏ binding သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်., ရုရှားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုနိုင်ငံတော်ဖွစျကွောငျးကိုအုပ်ချုပ် မဟုတ် တကယ်တော့စီရင်တော်မူခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် Yuko လျော်ကြေးပေးရန်တာဝန်ရှိသည်ဟု, စီရင်တော်မူခြင်းရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အလိုက်ဖက်မဟုတ်ခဲ့ကတည်းက. အဆိုပါတရားရုံးသတင်းများအရစီရင်တော်မူခြင်းအားပြဋ္ဌာန်းနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုမကြုံစဖူးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပါဝငျမယ်လို့သောယူဆချက်အပေါ်ဆင်ခြင်ခြင်း based, တန်းတူရေးနှင့်တရားမျှတမှု၏အခြေခံမူဆန့်ကျင်ခဲ့သည့်. ဒီအာဏာရနှင့်အတူ, အဆိုပါတရားရုံးဥရောပလူ့အခှငျ့အရေးတရားရုံးသို့ကျော်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ပြည်တွင်းဥပဒေပြဌာန်းဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစားပေးမှုကိုပေး၏.
ဥရောပ၌မျိုးစုံတရားစီရင်မှုနှင့်ပြည်ပမှာ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုပေးပွဲပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့ Yuko ရှယ်ယာရှင်များ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုက်ပွဲစဉ်းစား, ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးရဲ့တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်ယခင်ရှယ်ယာရှင်များ '' အနေအထားအားနည်းသွားစေခြင်းငှါ.
သို့သျောလညျး, နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံး ECtHR ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်မပြုခဲ့ကတည်းက, စီရင်တော်မူခြင်း၏ပေမယ်သာစည်းနှောင်သဘောသဘာဝ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုပေးပွဲများအတွက်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတရားစွဲဆိုမှုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ဒါဟာရုရှားရဲ့ဆုံးမစကားကိုလည်းအောင်သောအချက်ဖြစ်ဟန်, ဒါဟာရုရှားကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌သရုပ်ဆောင်မခံခဲ့ရသော ECtHR ၏သော authoritative နိဂုံးချုပ်အပေါ်အားကိုးဖို့က enable မယ်လို့ကတည်းက.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးရဲ့အာဏာရ, မျှော်လင့်ထားသော်လည်း, သူတို့ရဲ့ချီးမြှင့်လျော်ကြေးငွေရရှိရန်ယခင်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာရှင်များ '' ကြိုးစားမှုအတွက်သေးသောအခြားအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်. အမျိုးမျိုးသောခုံသမာဓိဆုပြဋ္ဌာန်းရန်မှမျိုးစုံတရားစီရင်မှုအတွက်နေဆဲ-ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြိုးစားမှု, ပြည်တွင်းတရားရုံးများကဘေးဖယ်ထားခံရသူတို့ထဲကတချို့ရှိနေသော်လည်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥရောပတရားရုံး၏စီရင်ခြင်းထက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရှာကြံပိုရွေးချယ်စရာပူဇော်စေခြင်းငှါအကြံပြု, အနည်းဆုံးရုရှားမှာ.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, လူ့အခွင့်အရေး ECtHR ဥရောပတရားရုံး, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန, ရုရှားကအနုညာတစီရင်